Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8) Vaiti - Phcoker
Raw 1,3-Dimethylbutylamine (1,3-DMBA) powder, kana kuti chete dimethylbutylamine (DMBA), inoita kuti mishonga inokonzera .......
Unyanzvi: 1490kg / mwedzi
SKU: 108-09-8 Category: Kuonda
Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8) video
Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8) Tsanangudzo
Product Name Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder
Kemikari Name Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder;108-09-8; 4-methylpentan-2-amine;2-Pentanamine, 4-methyl-;2-Amino-4-methylpentane; 1,3-Dimethylbutanamine
muchiso Name dimethylbutylamine (DMBA)
Kirasi yeMishonga Dietary supplement
CAS Number 108-09-8
Molecular Wsere 101.19
Monoisotopic Mass 101.193 g / mol
Kunyorera Point 108-110 ° C
Biological Half-Life kupfuura 18 + maawa (amphetamine anozivikanwa kuva nehafu yehupenyu).
ruvara Sora Mafuta asina kuchena
Skukodzera Chloroform, Ethyl Acetate
APane Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder inoshandiswa kuongorora kushandiswa kwemhando isina kukodzera polymethacrylate resin sechikamu chechimiro mumvura chromatography ine kuonekwa kweUV.
Raw 1,3-Dimethylbutylamine powder (1,3-DMBA), kana kuti tu dimethylbutylamine (DMBA), inoshandiswa nemishonga inokurudzira yakabatana nemethylhexanamine (1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA)) apo boka reboka rinotsiva boka reamyl. Iyo inozivikanwawo se AMP Citrate (4-amino-2-methylpentane citrate). PIT Citrate haisi kuitika zvakasununguka mumitambo yakakura, asi inogona kuwanikwa mune zviduku muPuchong Tea, asi inofungidzirwa kuti zhinji yeCITrate ye AMP inoshandiswa muzvigadziridzo inogadzirwa zvakagadzirwa.
1,3-Dimethylbutylamine (methylpetanamine) uye DMAA (Methylhexanamine) inoshandisa chimiro chakafanana, asi DMAA inowedzera kabhoni mumasaga. Nemhaka yezvifananidzi izvi, zvinokonzerwa ne1,3-Dimethylbutylamine zvakafanana zvikuru neDMAA. Iyo inodyiwa mudiki madhodhi, inokurudzira simba yepakati yenheyo system.
kurasikirwa uremu, kunatsiridza mitambo, nekuvandudza uropi hunoita basa.
1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8) Mushonga Wekuita
1,3-Dimethylbutylamin inoshanda, munyanzvi, kuburikidza nemitsetse yakafanana neDMAA, asi kwete sezvinoita. Izvi zvinoita kuti uve neurological stimulant, sezvo inoshanda nekusunungura neurotransmitter ine simba norepinephrine, kuwedzera pane dopamine. Kuwedzera kwemaawa aya mahomoni maviri kunogona kuwedzera huwandu hwedu hwekucherechedza, kuisa pfungwa, simba, kukurudzira, uye kuchenjerera kwepfungwa.
kunyoresa of 1,3-Dimethylbutylamine powder (1010396-29-8)
▪ Sezvimwewo zveDMAA, Mishonga inoshandiswa mishonga, yakasanganiswa nehutano hwehutano uye yekubatsira, mishonga yehutano, nezvimwewo.
▪ Muutano, 1,3-dimethyl amine hydrochloride inogona kuwedzera simba, inozorodza, Uye inovandudza simba remuviri, kana kuti calorie kudzivirira vatambi vanounganidza simba zvakanyanya.
▪ Inoshandiswa mukurema kirasi uko iwe unogona kuderedza zvakanyanya kuda kudya kunokonzerwa nekupisa. Kune mitsara ye1,3 - dimethyl amine hydrochloride inogona kuwedzera kufanana, kugadzirisa mafungiro, kunyanya kudzivisa kudya, kuvhara mufaro.
▪ Inogonawo kushandiswa se caffeine nezvimwe zvinoshandiswa nezvokudya zvinowedzera.
Yakakurudzirwa 1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8) Dosage
Pamusana pokushayikwa kwemakiriniki ekuedzwa kwe 1,3-Dimethylbutylamine powder, zvakaoma kuziva chirongwa chinokurudzirwa. Nokudaro, ruzivo runotevera chete rwekutarisa:
Nhamba ye 1,3-Dimethylbutylamine powder inotarisirwa kuva yakakwirira kudarika DMAA inoratidzira iyo neC100 kusvika 350 mg. Nguva yekubatsira kwakanaka inenge maawa 4-6.
Inonyanya kushanda kuitira kuwedzera simba panguva yekudzidzira. Zvakanakisisa kutora chikamu pamusoro pemaminitsi e30 vasati vadzidziswa. Kuti uwedzere kushandiswa kwemagetsi uye kuderedza mafuta, unofanira kuitora mangwanani kana kuti usati wadya.
1,3-Dimethylbutylamine powder inoshanda s synergistically ne caffeine, uye nekuda kwekuti iwe unogona kuwana kazhinji zvinhu zvose mu-pre-workout inowedzera. Muchiitiko chekushandisa "Solo", 200-300 mg ye caffeine inofanira kuwedzerwa kuti kuwedzere maropafadzo.
Benefits of 1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8)
Nemhaka yekufananidzwa kwayo kune DMAA kushandiswa kwayo uye kubatsirirwa pakuwedzererwa kwave kwakafanana zvakafanana.1,3-Dimethylbutylamine powder inokanganisa chirwere chepakati chinokonzera caffeine asi inonyatsooneka yakasimba. Paunenge uchishandura usati wadzidziswa unogona kunzwa:
♦ Wedzera simba.
♦ Wedzera nesimba, zvose aerobic uye anaerobic.
♦ Inotungamirira kumakamuri akakwirira, kujekesa mupfungwa nekukurumidza kwemasabetism.
♦ Batsira mafuta kupisa.
♦ Hncrease mumitambo yekutambira.
Zvisinei, kusiyana nekukwirira kwakanyanya kwe caffeine, 1,3-Dimethylbutylamine inowanzobatanidzwa nekuwedzera kusunungurwa kwemasimba uye kudarika kwekuputsika.
Tianeptine Sulfate, inonziwo Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder, is ......
Unyanzvi: 1350kg / mwedzi